Indlela yokwenza i-Crystal Skull
Ukukhenkceza iKhakha ngokuKhusela
Funda indlela yokwenza i-crystal skull yakho, iHalloween, Usuku lwabafileyo, okanye ukuhlobisa indawo yakho. Iprojekti elula yokwenza i-crystal eyenza ingxoxo enomdla.
Izinto zeCriststal Skull
Ndikhetha i-borax ukuba ikhule i-crystal skull, kodwa ungasebenzisa nayiphi na i- crystal recipe . Enye into enomdla inokuthi ikhule i-skull crystal skull kwaye uyibeke kwisibhokhwe.
Iphepha lekhasi elincinci (ndineyami kumatshini we-craft kaMichael)
isitya esingqongqo ngokwaneleyo ukuze ubambe iqhakazi
Crystallize i Skull
Qinisekisa ukuba isitya sinzulu ngokwaneleyo ukuba ubambe ingqayi.
Dlulisa amanzi abilayo okanye ashushu kakhulu kwisitya.
Hlanganisa kwi-borax de iyeke ukuphela. Le projekthi ibonakala ipholile ngekristal ecacileyo, kodwa ukuba uyathanda, ungongeza umbala wokutya ukuze ukhanyise i-crystals yeckull.
Beka igaqa kwisitya sekristal ekhulayo isisombululo. Iphepha lekhadibhodi zekhadi zithatha ixesha ukuze zithathe i-liquid, ngoko ke i-gaqa ikwazi ukuthambisa ngexeshana. Oku kuhle kwaye ihlala isombululo ngokwayo, kodwa unako ukunciphisa i-gaqa ngeglasi okanye esinye isitya ukuba iqhube kakhulu. Enye inketho ukuguqula i-gaze rhoqo ukuqinisekisa ukuba yonke into evulekileyo ibonakala kwi-liquid.
Hlola inkqubela yokukhula kristall nganye iiyure ezimbalwa. Ufanele ube nesityalo esihle samakheleji ngaphakathi kweyure ukuya kobusuku, kuxhomekeke kwindlela ezalisekile ngayo isisombululo sakho kunye nokukhawuleza kwehlile. Xa unelisekile ngama crystals, susa i-gawuni uze uyibeke kwiphilisi yephepha.
Ukuba ufuna ezinye iikristali kwikhayi, thatha i-crystal skull uze uyibeke kwisisombululo esitsha sokufumana udidi lwesibini lokukhula kwe-crystal. Qinisekisa ukuba isisombululo esitsha sigcwele (ayikho enye i-borax iya kutshabalalisa) okanye uza kubeka ingozi ekuqheleni ezinye iikristali kunokuba ukhule ngaphezulu.
I-Acids kunye neZiseko: iiKharity Titration
I-Science Notation kwi-Chemistry
I-Alchemy Imifanekiso neZithombe
Indlela yokubala ukugxila kweSikhumbisi seMichiza
Uluhlu lwee-Alloys zetsimbi ukusuka kwi-A ukuya kwi-Z
Indlela yokwenza iKhabhuji ebomvu i-PH Indicator kunye nePH Paper
Yintoni Amanzi Adibeneyo?
Imibuzo yoVavanyo lweeNzululwazi zoLingana
Ukuxineka Kwendawo yokuPhukisa Ingxaki Umzekelo
Ingcaciso yeCarbon Carbon
Indlela yokwenza amanzi ukusuka kwi-Hydrogen kunye ne-oksijeni
Itzamná: UMoya oPhezulu weMeya kunye noYise weNdalo
Ukhokho lukaLouisa May Alcott
Iintlobo ezintlanu zobugcisa
Indlela yokuphumelela njengomfundi we-Intanethi
Ukwahlukana phakathi kweeNgxelo zoHlolo kunye neZivumelwano
Ukuwela uMlambo iYordan - Inkcazo yeBhayibhile
Indlela yokwazisa i-Jikesel angelosi
Le Day J - Inkcazo yesiFrentshi ichazwa
Umlando weMbalance Matriance History
Ukubala: I-Cardinal Numbers yeSpeyin
Uluhlu lwezinto ezikhanyisa ukukhanya okumnyama (ukukhanya kwe-ultraviolet)
UJustin Bieber - "Usho ukuthini?"
Imibuzo Yokubulela Ukubulela
I-Top 40 Christmas Oldies IiNgoma
Ngaba ama-Outliers anqunywe njani kwi-Statistics?
'Populismo' Ikhethwe njenge-2016 iZwi leSpain lonyaka
Indlela yokudibanisa "umculi" (ukukhanga)
I-NOWAK - Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
U-John Lennon "Cinga" i-Albhamu
Saturn kwiCapricorn - iSaturn Signs
Oko Okufanele Ukwazi Ngokusuka kwiFlorida
Isizukulwana esibuhlungu (ubuxoki)
Iimpawu eziphambili zeFlanders Episodes ze- 'The Simpsons'
Inkcazo engabonakaliyo kwiKhemistry